Muraayadaha Muraayadaha Dumarka ee Kala-daadashada ah Hanukeii
Badweynta Baasifigga waa isha kale ee dhiirrigelinta u ah Hanukeii iyo abuuritaanka mid kale oo ka mid ah uruurintayada dib loo soo saaray xeebta Baja California.
Biyaha ka Pacific waa qabow, waxay dhiirrigelisaa adkeyn waxayna nagu amreysaa ixtiraam, waxay noo sheegaysaa inay tahay mid aan la xakamayn karin oo gebi ahaanba xor ah. Waan ognahay inaan la noolaan karno isaga oo aan ku raaxeysan doono wax walba oo uu na siiyo, xitaa waxay noo ogolaaneysaa inaan dareemo isku xirnaan iyo inaan isaga la midowno.
Kalifoorniya waxaa ku maydhan biyaha biyahan, taas oo u oggolaanaysa inay bixiso qorrax-dhacyo riyadeed iyo waddooyin dhex mara magaalooyinka ku yaal xeebaheeda. Si loo abuuro loona naqshadeeyo moodeelkeenna PACIFIC waxaan go'aansanay inaan safar ku marno dariiqa Baasifigga waxaanan awoodnay inaan booqanno meelo aan caadi ahayn oo ay ka mid yihiin laydhka Point Bonita, waardiye aamin ah oo ka socda San Francisco Bay oo na siisay aragtiyo xiiso leh oo aan ka fikiri karno. ah Gaaddi Golden Golden, ama Half Moon Bay, oo fiditaankiisa iyo furitaankiisa dhanka badda, xasilloonida ku neefsatay hawo saafi ah ayaa siisay, iyo habeenka horteenna ku soo dhacaya ee keligood badweynta la jooga, ayaa naga dhigay inaan halkaas sii joogno weligood. Meel kale oo aan ka helnay sixir iyo soo jeedin badan waxay ahayd fiilada volcano-ka ee Morro Bay, oo aad u weyn kuna wareegsan hareeraha ciidda.
Dhammaan midabada, qaababka dhagxaanta, xoogga ay muujiyeen qaar ka mid ah muuqaallada iyo isku xirnaanta aan la dareemeyno dabeecadda iyo dhinaca duurjoogta iyo wax isdaba marinta ee California, ayaa naga caawiyey sameynta ururinta PACIFIC, oo codadkiisu u egyihiin ciidda dusha sare xeebta, qolofka aan helno kalabar ayaa ku aasan ciidda iyo mugdiga nagu hareeraysan markii aan isku hoos quusinno biyaha qaboojiyey ee badda.